ब्रुस ली अझै सुपरस्टार
हङकङ, - 'कुङ फु किङ' का नामले विख्यात ब्रुस लीको निधन भएको ३८ वर्ष बितिसकेको छ । उनको फ्यान सर्कल भने घटेको रहेनछ । स्टार फेरीस्थित 'एभिन्यु अफ स्टार्स' मा प्रतिष्ठापित उनको सालिक परिसरमा शनिबारको दृश्यले यो कुरो पुष्टि गर्‍यो ।
उनको ७० औं जन्मजयन्तीमा सालिकलाई पृष्ठभूमिमा पारेर तस्बिर खिच्नेहरू लामबद्ध थिए । दुई मिटर अग्लो ढलोटको उक्त सालिक ब्रुस ली फ्यान क्लबले पाँच वर्षअघि नै ठड्याएको हो । तर उनको जयन्तीमा यहाँ बढी नै क्यामेराहरू क्लिकक्लिक गर्छन् ।
'म नोभेम्बर २७ का दिन यहाँ आउन छुटाउँदिनँ,' आफूलाई बु्रस लीकी बेजोड फ्यान बताउने एउटी चिनियाँ युवतीले भनिन्, 'मैले उनलाई देख्न नपाए पनि उनी मेरा आदर्श हुन् ।'
किन सुन्दरी ? ती युवती भावुक भइन् । सम्हालिएपछि बोलिन्, 'म उनकै फिल्म हेरेर मार्सल आर्टप्रति आकषिर्त भएकी हुँ ।'
एभिन्यु अफ स्टार्सवरपर बालबालिकादेखि बूढापाकासम्म
थिए । अधिकांशले तस्बिर खिचाउँदा ब्रुस लीकै स्टाइलको अनुसरण गर्न कोसिस गरिरहेका थिए ।
'तपाईं पनि ब्रुस लीको फ्यान ?' सालिकमा टोलाइरहेका
एक पाकालाई सोधियो ।
'उनी मेरा लागि देवता समान छन्,' उनले एकैसासमा भने, 'उनले विश्वभरका मानिसमा चिनियाँहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोणमै परिवर्तन ल्याउन सघाएका छन्,
उनी हाम्रा लागि वरदान थिए ।'
सन् १९४० मा अमेरिकाको सन प|mान्सिस्कोमा जन्मिए
का ब्रुस ली १९७१ मा हङकङ बसाइँ सरेका थिए । 'द बिग बोस', 'फिस्ट अफ फ्युरी' र 'द वे अफ द ड्रागन' को सफलतापछि उनले सुपरस्टारको हैसियत पाए । चर्चा र सफलताको चरमोत्कर्षमा रहेकै बेला ३२ वर्षको उमेरमा हङकङस्थित एक सहपाठीको घरमा उनी दिवंगत भए । अहिलेसम्म रहस्यमै रहेको उनको मृत्युलाई गत वर्ष हङकङ भ्रमणमा रहेकी उनकी छोरी स्यानोनले भने दुर्घटना बताएकी थिइन् । ब्रुस लीको अन्तिम चिनोका रुपमा हङकङस्थित काउलुन तुङमा रहेको उनको घरलाई स्थानीय सरकारले म्युजियम बनाउने घोषणा गरिसकेको छ । 'क्रेन्स नेस्ट' का नामले चिनिएको उक्त घरमा ब्रुस लीले श्रीमती लिन्डाका साथ अन्तिम दिनहरु बिताएका थिए ।
ब्रुस लीको जन्मजयन्तीकै पूर्वसन्ध्यामा उनको जीवनकथा समेटिएको पहिलो चलचित्र 'ब्रुस ली माई ब्रदर' सार्वजनिक भएको छ । सत्यतथ्य जानकारी मात्र समेटियोस् भनी निर्माणपूर्व विस्तृत अध्ययन अनुसन्धान गरिएको निर्माता पक्षको दाबी छ । निर्देशक रेमन्ड यिपले ब्रुस लीको जीवनीबारे जान्न उत्सुक उनका प्रशंसकहरुका लागि यो फिल्म राम्रो सामग्री हुने बताएका
छन् । बु्रुस लीका बारे यथार्थ जानकारी सहितको फिल्म बनेकामा उनका आफन्तहरू खुशी रहेको पनि निर्देशकले उल्लेख गरेका छन् ।
ब्रुस लीका भाइ रोबर्ट ली सहनिर्माता रहेको 'ब्रुस ली माइ ब्रदर' मा हङकङ र चिनियाँ कम्पनीहरुको समेत लगानी छ । हङकङेली नायक/गायक आरिफ रहमानले यसमा ब्रुस लीको भूमिका निर्वाह गरेका छन् ।
Labels: personality, toursim, world